Maamulka Galmudug ayaa Faragalin ku eedeeyay Golaha Aqalka sare – XOGMAAL.COM
Maamulka Galmudug ayaa Faragalin ku eedeeyay Golaha Aqalka sare
Masagawaa wuxuu xusay in madaxda dowladda ay adeegsaneyso xubnaha aqalka sare oo uu ku sheegay inay ka gaabiyeen gudashada waajibaadkooda dastuuriga ah, islamarkaana ay ku milmeen faragelinta madaxda dowladda ay ku heyso Galmudug.
By Soomaaliya	 On Oct 4, 2018
Maxamed Aadan Cusmaan Masagawaa Wasiirka warfaafinta Galmudug mar uu warbaahinta kula hadlayay Dhuusamareeb ayuu sheegay inay socoto faragelinta madaxda dowladda ay ku hayaan Galmudug.
Wasiir Masagawaa ayaa yiri “Weli waxaa socota faragelinta madaxda dowladda federaalka ay ku hayaan arrimo hoosaadka dowlad goboleedkadka Galmudug, taas oo hada qaadatay waji cusub, iyaga oo adeegsanaya Senatarada aqalka sare ee Soomaaliya, waxaa cad in aqalka sare ay ka gaabiyeen gudashada waajibaadkooda dastuuriga ah, iyada oo ay hada cadahay inay ku milmeen faragelinta dowladda ay ku heyso dowlad goboleedyada gaar ahaan Galmudug”.
Si loo soo afjaro is faham waaga soo kala dhex galay Madaxda Maamul Goboleedyada iyo Dowladda Federal-ka ayaa xubno ka tirsan Golaha Aqalka Sare waxey xil iska saareen sidii loo dhameyn lahaa tabashooyinka ay qabaan Maamulada meeshana looga saaro khilaafka jira.
Diyaarado dagaal oo duqeymo ka fuliyay koofurta Soomaaliya Gedo.
Golaha Iskaashiga oo ka soo saaray qolaal diidaya war-murtiyeedkii aqalka sare